Kooxda Horseed oo xiddig muhiim ah weynaysa kulanka galabta ee horyaalka Somali Premier League – Gool FM
Kooxda Horseed oo xiddig muhiim ah weynaysa kulanka galabta ee horyaalka Somali Premier League
Haaruun June 18, 2020
(Muqdisho) 18 Juun 2020. Horyaalka Somali Premier League ayaa dib loo amba-qaadi doonaa maanta, maadaama muddo labo bilood iyo bar ah uu hakad ku jira sabab la xiriirta Caabuqa Coronavirus kaas oo dunida sameyn weyn ku yeeshay.
Kooxaha Horseed iyo Raadsan ayaa galabta wada dheeli doona kulan hore loo calaamadeyay inuu dhaco, balse Caabuqa COVID-19 ayaa baajiyay, taas oo ka dhigan inuu dib u soo laabtay hardankii loogu jiray horyaalka.
Hoggaamiyeyaasha horyaalka Somali Premier League ee Horseed ayaa sanadkan ku jirtay bandhigii ugu fiicnaa abid marka loo eego sanadihii ugu dambeeyay kooxda, maadaama ay hoggaanka hayso, iyadoo leh 22-dhibcood kaliya hal dhibcood ayeyna ku haysaa kooxda Cawo iyo Maalin ee Horseed.
Horseed kulankan waxay weyn doonta xiddigeeda khadka dhexe ugu dheela Xasan Cabdinuur Geesey (Xasaasi), kaas oo dhaawac ka soo gaaray lugta midig gaar ahaan seedka, kulankan galabta nasiib uma yeelan doono inuu dheelo.
Xasaasi waa mid kamid ah xiddigaha ugu fiican horyaalka marka laga hadlaayo ciyaartoyda ka dheesha khadka dhexe ee garoonka, isagoo sanadkii la soo dhaafay 2019-kii ku guuleystay xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Somali Premier League.
Xiddigan ayaa ka hadlay dhaawaca soo gaaray iyo kulanka galabta wuxuu yiri: “Aad ayaan ugu xumahay inaan kooxdayda ka maqnaado kulanka galabta, balse waxaan kooxdayda u rajayna guul inay ka gaarto dhiggeeda Raadsan.”
”Dhaawaca aan qabo waa mid fudud wuxuu iga soo gaaray dhanka seedka anigoo ku guda jira waajibaadka kooxda ee tababarka ay isku diyaarinaysay kulankan, balse nasiib-darro waxaa i soo gaaray dhaawac kaas oo sababay inaan ciyaartan maqnaado.”
“Kooxda waxaa joogo xiddigo badan oo buuxin kara booskeyga, waan ku kalsoonahay xiddigaha jooga kooxda Horseed, waxaan ku han weynnahay inaan ku guuleysanno horyaalka Somali Premier League.” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Xasaasi.
Si kastaba ha noqotee, xiddigan ayay macquul tahay inuu kulan soo aaddan ka maqnaado Kooxdiisa Horseed, maadaama uu u baahan yahay inuu helo nasiino ku filan.
DEG DEG: Kooxda kubadda cagta Chelsea oo xaqiijisay saxiixa Timo Werner
RASMI: Kooxda Real Madrid oo xaqiijisay in mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah uu seegayo kulanka caawa ee Valencia